Guddoonka Golaha Shacabka BFS iyo Madasha Xisbiyada oo isku…
By axadle On Jul 29, 2020
Muqdisho waxaa kulan gaar ah ku yeeshay Guddoonka Golaha Shacabka BFS iyo Madasha Xisbiyada Qaran, ujeedka fadhigooda ayaa ahaa sidii ay uga wada hadli lahaayeen Walwalka Doorashada ay ka qabaan Axsaabta mucaaradka.
Xubno katirsan Madasha ayaa Axadle u sheegay in Guddoonka ay la wadaageen in la qabto doorasho waqtigeeda aan dhaafin, waa marka muddo xileedka Xukumadda Federaalka uu dhamaado.
Si meesha looga saaro wararka la xiriira in Dowladdu ay damacsan tahay muddo kororsi, inkasta oo Hogamiyayaasha Dowladdu ay horay u sheegeen in aysan jirin wararkaas ku saabsan in waqti dheereysi damacsan yihiin.
Mas’uuliyiinta Kulanka yeeshay waa Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo ku xigeenkiisa 1-aad, halka dhanka Xisbiyada ay ka socdeen Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed.
“Kulankan oo ka duwanaa kulamadii hore ayay Guddoonka Golaha Shacabka sheegeen in aysan mataleyn, kana socon Hay’ad ka baxsan tan ay guddoonka u yihiin ee Golaha Shacabka, Waxaana Madashu gaarsiisay labadda mas’uul mowqifkeeda ku aadan doorashooyinka dalka” ayaa lagu yiri war kasoo baxay Madasha Xisbiyada.
Sidoo kale, qoraalka ayaa lagu caddeeyay in aan lama huraan ay tahay in la adeegsado farsamo looga gudbayo xaaladda kala guurka (Geeddi socodka) ee loogu diyaargaroobayo qabashada doorashada oo aan dib uga dhicin waqtiga dastuuriga ah.
“Hoggaanka Madasha Xisbiyada Qaran iyo Guddoonka Golaha Shacabka ayaa isku raacay in laga fogaado in Dalku galo marxalad degenaasho la’aan ah maadaama uu gabaabsi yahay waqtigii Hey’adaha Dastuuriga ahaa ee DFS, waxaana hoggaanka MXQ u caddeeyey Guddoonka Golaha Shacabka in aan la aqbali karin muddo kororsi, lama huraanna ay tahay in Doorashada lagu aado waqtigeeda” ayaa lasii raaciyay qoraalka kasoo baxay Madasha.
Wali war dhankooda kama aysan soo saarin Guddoonka Golaha shacabka kulankaan, marka laga reebo qoraalka lagu daabacay bogga Golaha markii uu furmayay kulanka oo ahaa mid albaabada u xirnaa.